အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်သူတစ်ယောက်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်နည်း! | How to Be an Overcomer!| Real Conversion
ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။
ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
တရားဒေသနာတော်ကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်၌ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင် (၂၄)နှစ်တိုင် ကျွန်ုပ်၏သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း၏ အသက်တာပြောင်းလဲသော တရားဒေသနာကို ဝါရင့်သင်းအုပ်ဆရာ Dr. R. L. Hymers, Jr. က ဟောပြောသည်။
၁၆၇၄-၁၇၄၈ခုနှစ် အိုက်ဇက်ဝပ်(စ်)သီကုံးသော “ကျွန်ုပ်သည် ကားတိုင်၏စစ်သည်လား ကျူးဓမ္မသီချင်းကို တရားဒေသနာတော်မတိုင်မီ သီဆိုသည်။
Lord’s Day Evening, July 26, 2020
“မြောက်လေ၊ နိုးပါ။ တောင်လေ၊ လာပါ။ ငါ့ဥယျာဉ်အပေါ်သို့ လာကြပါ။ မွှေးကြိုင်သောအနံ့သည် ပျံ့လှိုင်ပါ စေ။ ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဉ်တော်သို့ဝင်၍၊ ချိုသောအသီးကို စားတော်မူပါစေ။” (ရှောလမုန်သီချင်း ၄း၁၆)
ဤတရားဒေသနာတော်သည် ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ ကြားဖူးသမျှထဲမှ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ အတ္ထုပတ္တိကို သင်ဖတ်ပါက ဤတရားဒေသနာတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲပုံကို သင်မြင်တွေ့ရပါ လိမ့်မည်။ ဒေါက်တာ Dr. Robert L. Sumner က “ပုန်ကန်ခြင်းကြားထဲက သမ္မာတရားအတွက် ရပ်တည် တဲ့လူကို ငါလေးမြတ်နိုးတယ်၊ R. L. Hymers, Jr. က ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသို့ သာသနာပြုဆရာများထဲမှ တစ်ယောက်က “Dr. Hymers က ကျွန်တော်အတွက် သူရဲကောင်း တစ်ယောက်ပါ”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဤအရာက အောင်မြင်ကျော်လွားရန် ခွန်အား ဖြစ်စေသည့် ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။ ဤအရာက သင့်အသက်တာကိုလည်း ပြောင်းလဲ‌ စေလိမ့်မည်ဟု မျော်လင့်မိပါသည်။
ဒေါက်တာလင်းက “လူသားက အခွင့်အရေးအားဖြင့် ဖန်ဆင်းခံတာမဟုတ်ပါ၊ ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်း ခြင်းအရာတွေအပေါ် အစိုးရရန် အထူးဖန်ဆင်းခြင်းခံသည်။ အနာဂတ် အုပ်စိုးခြင်း (ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်) အတွက် ယုံကြည်သူများပြင်ဆင်ရန် ယောသပ်အသက် တာအားဖြင့် ဖော်ပြသည်။”ဟု ပြောခဲ့သည်။
အီဂျစ်ပြည်ကို အစိုးရခွင့်မရခင် ဘုရားသခင်က ယောသပ်ကို အောင်မြင်ကျော်လွားရန်နှင့် သူ၏ အသက်တာအဆုံး၌ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံစေရန် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောခရီးကို လျှောက်စေ သည်။ ယောသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများသည် အီဂျစ်ပြည် သာမက ဣသရေလ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်နှင့် ဆက်စပ်ပါသည်။ ယောသပ်၏အုပ်စိုးခြင်းမပါဝင်ဘဲ၊ အဲဂုတ္တုပြည်လူမျိုးများ အစာငတ်မွတ်ခြင်းသော်၎င်း၊ ဣသရေ လလူမျိုးများ သတ်ဖြတ်ခြင်းသော်၎င်း တွေ့ကြုံနိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ ဘုရားသခင်၏ ရွေးနှုတ် ခြင်းလည်း ပြည့်စုံနိုင်ခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ယောသပ်၏ဝိညာဉ်ပိုင်းအသက်တာကိုတည်ဆောက်ရန် ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဆင့်များကို ရှောလမုန်သီချင်း ၄း၁၆ တွင် သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ပါသည်။
“မြောက်လေ၊ နိုးပါ။ တောင်လေ၊ လာပါ။ ငါ့ဥယျာဉ်အပေါ်သို့ လာကြ ပါ။ မွှေးကြိုင် သောအနံ့သည် ပျံ့လှိုင်ပါစေ။ ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဉ်တော်သို့ဝင်၍၊ ချိုသော အသီးကို စားတော်မူပါစေ။” (ရှောလ မုန်သီချင်း ၄း၁၆)
ယောသပ်၏အသက်တာကို ဂရုတစိုက်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သူ့အကျင့်စရိုက်၏ မွှေးကြိုင်သောနံ့သာ စီးထွက်မသွားမီတိုင်အောင် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုလေတိုက်ရန် တောင်လေ၊ မြောက်လေများကို မည်သို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပုံကို သိရှိနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အသက်တာကို ဒုက္ခကြုံတွေ့ခြင်းအားဖြင့် ပြင်ဆင် ပေးခဲ့သည်။ သူ၏ခန္ဓာကို ပင်ပင်ပန်းပန်း လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။ အရှက်ကွဲစေခဲ့သည်။ သူ၏စိတ်ကို ပျိုးထောင် ရန်၊ အသိအမြင်တည်ငြိမ်စေရန်သော်၎င်း၊ သူ၏ဆန္ဒခိုင်မာလာရန်သော်၎င်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အကျင့်စရိတ္တ ပိုမိုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ဘုရားသခင်၌သူ၏ယုံကြည်ခြင်း ပိုမိုတိုးပွားလာစေရန် မတရားမှုနှင့်ကျေးဇူးကန်းမှု စသည် တို့ဖြင့် သူ့ကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့သည်။ ယောသပ်၏အသက်တာမှ တောင်လေ၊ မြောက်လေ၏ လုပ်ဆောင်ပုံကို ရှင်း လင်းစွာမြ င်တွေ့နိုင်ပါသည်။
တောင်လေ - မိဘချစ်ခင်စုံမက်ခြင်း
ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃ရး၁-၄ သို့သွားပါ။
“ယာကုပ်သည် မိမိအဘတည်းခိုရာ ခါနာန်ပြည်၌နေ၏။ ယာကုပ် အမျိုးအနွယ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိများ ဟူမူကား၊ ယောသပ်သည် အသက်တဆယ်ခုနစ်နှစ်ရှိ၍၊ အစ်ကိုတို့နှင့်အတူ သိုးဆိတ်များကို ထိန်းလေ၏။ အဘ၏မယား ဗိလဟာနှင့် ဇိလပ၏သားတို့နှင့်အတူ နေ၍၊ သူတို့အပြစ်ကို အဘအား ကြားပြောတတ်၏။ ဣသရေလသည် အသက်ကြီးစဉ်အခါသား ယောသပ်ကို ရသောကြောင့်၊ အခြား သောသားအပေါင်း တို့ကို ချစ်သည်ထက် ယောသပ်ကို သာ၍ချစ်၏။ အဆင်း အရောင် ထူးခြားသောအင်္ကျီကို ချုပ်၍ပေး၏။ အဘသည် မိမိသားအပေါင်း တို့ တွင်၊ ယောသပ်ကိုသာ၍ ချစ်ကြောင်းကို၊ အစ် ကိုတို့သည် သိမြင်သောအခါ၊ သူ့ကို မုန်း၍ မေတ္တာစကားကို သူ့အား မပြောနိုင်ကြ။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၇း၁ -၄)
ဒေါက်တာလင်းက “မိဘမေတ္တာသည် ကလေး၏အနာဂတ်ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့် လုပ်စရာအများ ကြီးရှိသည်”ဟု ပြောခဲ့သည်။
ယောသပ်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နတ်ဆိုးအကြား ခြားနားမှုကိုသိသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အမှန်တရားသည် တုံ့ပြန်မှုရှိသောအမြင်သဘောထားများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် ခြားနားသော အမျိုးအစားနှစ်ခုဖြစ်သည့် မှန်သောဆိုးယုတ်ခြင်း နှင့်ချစ်ခြင်း မေတ္တာမဟုတ်ပါ။ မကောင်းမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ပါ။ သူရဲဘောကြောင်သာဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နေသရွေ့ မကောင်းမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည် မြင့်မြတ်သောလုပ်ရပ် တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ အားပေးသင့်သည်။ ယောသပ်၏အိပ်မက်နှစ်ခုသည် သူ့အစ်ကိုတို့၏မာနကို နာကျင်စေသည်၊ မနာလုမှုကို ဖြစ်စေသည်။ သို့သော် ယောသပ်သည် သူတို့ကို ချစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ သူ့အဖေ၏နာခံမှု ရှိသောသား ဖြစ်ပါသည်။”
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် အဖေ့မေတ္တာမရရှိခဲ့ပါ၊ အမေ့မေတ္တာနှင့် ထောက်ခံမှုက ကျွန်တော့်အဖေကို မုန်း တီးစေခဲ့သည်။ အမေသည် စုံလင်ခြင်းနှင့်ဝေးလှသည်။ သို့သော် “ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ခါ ကျွန်တော်သိခဲ့သည့် သူများထဲမှ၊ သူမသည် အကျင်နာဆုံး၊ အချိုသာဆုံး၊ အသတ်ရပ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ စာအုပ် များကိုချစ်တတ်သော်၎င်း၊ ကားမောင်း တတ်ရန်နှင့် တစ်ယောက်တည်းနေချိန်တောင် မတ်တပ်ထပြီး လိုအပ် သည့်အရာများကို ပြောရန် အမေက သင်ပေးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာ ၁၆၊ ကျွန်ုပ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ)။ ကျွန်တော့် အမေက ခုခံကာကွယ်ပေးသူနှင့် ထောက်ခံအားပေးသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အမေ၏နောက်ဆုံးစကားမှာ “သားကို ချစ်တယ်၊ ရိုဘတ်”ဖြစ်သည်။ အမေ့အသက် ၈၀နှစ်တွင် ခရစ်တော်ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင် အဖြစ် ယုံကြည် လက်ခံသည့်အချိန်သည် ကျွန်တော်ဘဝ၌ ကြီးမားသော အရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
မြောက်လေ - ကျွန်စနစ်သို့ ရောင်းချခဲ့သည် -
ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၇:၂၃-၂၈သို့သွားပြီး၊ ကျမ်းစာဖတ်ရှုချိန်တွင် အားလုံးမတ် တပ်ရပ်ပေးပါ။
“ယောသပ်သည် အစ်ကိုတို့ထံသို့ ရောက်သောအခါ၊ သူဝတ်သောအင်္ကျီ၊ အဆင်း ထူးခြားသောအင်္ကျီကို ချွတ်ပြီးမှ၊ ၂၄သူ့ကိုကိုင်ယူ၍ တွင်းထဲသို့ ချကြ၏။ ထိုတွင်း၌ ရေမရှိ၊ သွေ့ခြောက်သောတွင်း ဖြစ်သတည်း။ ၂၅ထိုနောက် အစာစားခြင်းငှါ ထိုင် ကြစဉ် မြော်ကြည့်၍၊ ဣရှမေလအမျိုးသား အစုအဝေးသည် ဂိလဒ်ပြည်မှလာ၍ နံ့သာမျိုး၊ ဗာလစံစေး၊ မုရန်စေးများ ကို ကုလားအုပ်ပေါ်၌ တင်ဆောင်လျက်၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ခရီးသွားကြသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ၂၆ယုဒက၊ ငါတို့သည် ညီကို သတ်၍ သေကြောင်းကို ဖွက်ထားလျှင် အဘယ်ကျေး ဇူးရှိ သနည်း။ ၂၇ကိုင်ကြ။ ကိုယ်တိုင်မညှဉ်းဆဲဘဲ၊ ဣရှမေလ လူတို့အား ရောင်းလိုက်ကြစို့။ သူသည် တို့ညီ၊ တို့အမျိုး ဖြစ်၏ဟု အစ်ကိုတို့အားဆိုသည်ရှိသော်၊ ညီအစ်ကိုတို့သည် ဝန်ခံကြ ၏။ ၂၈ထိုအခါ၊ မိဒျန်အမျိုးသား ကုန်သည်တို့သည် ခရီး သွားကြစဉ်တွင်၊ အစ်ကို တို့သည် ယောသပ်ကို တွင်း ထဲက ဆွဲတင်ပြီးလျင်၊ ငွေအကျပ်နှစ် ဆယ်အဘိုးနှင့် ဣရှမေလလူတို့အား ရောင်း၍၊ ထိုသူတို့သည် ယောသပ် ကိုအဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဆောင်သွားကြ၏။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၇း၂၃ )
ဒေါက်တာလင်းက “ရိုးသားခြင်း၊ နာခံခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယ၊ စဉ်းစားခြင်း၊ ဤအရာများသည် လွယ်ကူသောအသက်တာအားဖြင့် ရရှိလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် အခက်အခဲအတား အဆီးများအားဖြင့်သာ ဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် သူအိမ်၌ကျန်ရစ်ခဲ့ မည်ဆိုပါက အောင်မြင်ကျော်လွားနိုင် သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ငွေကျပ်၂၀ ဖြင့် ရောင်းစားခံခြင်းသည် အကျင့်စာရိတ္တ။ သူသည် ဤအခြေအနေများအားဖြင့် ဘုရားသခင်က သူ၏အိပ်မက်နှစ်ခုကို မည်သို့ပြည့်စုံစေမည်ဟူသောအရာကို သူတွေးနိုင်သော်လည်း၊ သူ၏ ညီအစ်ကိုများကို ကျိန်ဆဲပြီး၊ စွပ်စွဲခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ငွေသား၂၀ဖြင့် ရောင်းချခံခဲ့ရခြင်း သည် သူ့၏ကိုယ်ကျင့်တရား ဖျာနာစေသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉း၁-၆သို့သွားပါ။ ၎င်းကိုဖတ်ရှုချိန် မတ်တပ်ရပ်ပေးကြပါ။
“၁ဣရှမေလလူတို့သည် ယောသပ်ကို ဆောင်သွား၍ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောက် သောအခါ၊ အဲဂုတ္တု အမျိုးသား ဖါရောဘုရင်၏အမတ်ဖြစ်သော ကိုယ်ရံတော်မှူး ပေါတိဖါထံမှာ ရောင်းကြ၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည် ယောသပ်ဘက်၌ ရှိတော်မူ သဖြင့် သူသည် အကြံထမြောက်တတ်၏။ အဲဂုတ္တုအမျိုး သား မိမိသခင်၏အိမ်၌ နေရလေ၏။ ၃သူ့ဘက်၌ ထာဝရဘုရားသည် ရှိတော်မူ၍၊ သူပြုလေရာရာ၌ အောင်စေတော်မူကြောင်းကို သခင် လည်း သိမြင်၏။ ၄ထိုကြောင့် ယောသပ်သည် သခင်ရှေ့၌ မျက်နှာရ၍ခစားလျက် နေရ၏။ သခင်သည်လည်း မိမိ အိမ်တွင် အိမ်အုပ်အရာနှင့် ခန့်ထား၍ ဥစ္စာရှိသမျှကို အပ်လေ၏။ ၅ထိုသို့အိမ်နှင့် ဥစ္စာရှိသမျှ ကို အုပ်စိုးစေသည် ကာလမှစ၍ ထာဝရဘုရားသည် ယောသပ်အတွက် ထိုအဲဂုတ္တု သား၏အိမ်ကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်၊ ပေးတော်မူသောကောင်း ကြီးမင်္ဂလာ သည် အတွင်း၊ ပြင်၊ ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက် လေ၏။ ၆သခင်သည် မိမိ၌ရှိသမျှကို ယောသပ်လက်သို့ အပ်၍၊ မိမိစားသောအ စာမှတပါး အခြားသောဥစ္စာရှိမှန်းကိုမျှ မသိမမှတ်ဘဲနေ၏။ ယောသပ်သည် ပုံပြင်ယဉ်ကျေး၍ အသွေးအဆင်းလည်းလှသောသူဖြစ်၏။” ( ကမ္ဘာဦး ၃၉း၁-၆ )
ယောသပ်သည် ဖောတိဖာအမည်ရှိသောဖာရောဘုရင်အစောင့်၏ ကပ္ပတိန်ဆီသို့ ရောင်းစားခြင်း ခံရသည်။ စောဒကတက်ခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ကာ၊ သူ၌ချထားသောတာ ဝန်များကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ သူ၏သခင်ဖောတိဖာ၏ယုံကြည်မှုကို အနိုင်ရခဲ့သည်။ အောင်မြင်မှုဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိ သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ သည်။ သူသည် နောက်ထပ်လေ့ကျင့်မှု လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူကို အရှက်ခွဲခံရရန် ခွင့်ပြုခဲ့ သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉း၁-၁၈ သို့သွားပြီး၊ ၎င်းကိုဖတ်ရှုချိန်တွင် အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပေးပါ။ ဒေါက်တာ လင်းက “လူငယ်အများက သူတို့အသက်တာမှာ မြောက်လေတိုက်ချိန်တဲ့အခါ ဝမ်းနည်းစရာလို့ ထင်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခပြဿနာတော်တော်များများက ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ရဲ့ ကိုယ်ထင်ပြသမှုဖြစ်ပါတယ်၊ ယေရမိက ‘လူသည်အသက်ပျိုစဉ်အခါ ထမ်းဘိုးကို ထမ်း ကောင်း၏။ ၂၈ထမ်းဘိုးကို တင်တော်မူသောကြောင့် တယောက်တည်းထိုင်၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေစေ’ (ယေရမိမြည်တမ်း ၃း၂၇)။ ရုန်းကန်ခြင်းမရှိဘဲ သက်တောင့် သက်သာရှိသောဘဝသည် လူငယ်များကို ပျက်စီးစေသည်။ သို့သော် သူတို့ထမ်းရသောထမ်းဘိုးသည် သူတို့ကို နောက်အဆင့်သို့ရောက်ရန် ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။”
“၇ထိုနောက်မှ သခင်၏မယားသည် ယောသပ်ကို တပ်သောစိတ်ရှိ၍ ငါနှင့်အတူ အိပ်ပါဟုဆို၏။ ၈ယောသပ်ကလည်း၊ ကျွန်တော်သခင်သည် အိမ်တော်၌ရှိသမျှ သောဥစ္စာတို့ကို ကျွန်တော်လက်သို့ အပ်ပါပြီ။ ကျွန်တော်၌ အဘယ်ဥစ္စာရှိမှန်း ကိုမျှ မသိ မမှတ်ပါ။ ၉ဤအိမ်တွင်လည်း ကျွန်တော်ထက်သာ၍ ကြီးသောသူ မရှိပါ။ကိုယ်မယားဖြစ်သော သခင်မမှတပါး အဘယ်အရာကိုမျှ ကျွန်တော်အား မမြစ်တားပါ။ သို့ဖြစ်လျှင် အပြစ်ကြီးသောဤအမှုကို ကျွန်တော်ပြု၍ ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သို့ပြစ်မှားနိုင်သနည်းဟု သခင်၏မယားကိုငြင်း၍ ပြန်ဆို၏။ ၁၀ထိုသို့ သခင် မသည် နေ့တိုင်းသွေးဆောင်သော် လည်း၊ ယောသပ်သည် သူ၏စကားကို နားမ ထောင်၊ သူနှင့်အတူအိပ်ခြင်း၊ နေခြင်းအမှုကို ရှောင်လေ၏။ ၁၁တနေ့သ၌ ယောသပ်သည် အမှုဆောင်ခြင်းငှါ အိမ်ထဲသို့ဝင်၍ အိမ်သားယောက်ျားတယောက်မျှ မရှိသောအခါ၊ ၁၂သခင်မက ငါနှင့်အတူ အိပ်ပါဟုဆိုလျက်၊ ယောသပ်အဝတ်ကို ကိုင်ဆွဲလျှင်၊ ယောသပ်သည် မိမိ အဝတ်ကိုစွန့်၍ ပြင်သို့ထွက်ပြေးလေ၏။ ၁၃ထို သို့သခင်မလက်၌ မိမိအဝတ်ကိုစွန့်၍ ပြင်သို့ ထွက်ပြေးသည်ကို သခင်မသိမြင်သော အခါ၊ ၁၄အိမ်သားယောက်ျားတို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့ ကြည့်ကြ။ ငါတို့၌ မရိုမသေ ပြုစေခြင်းငှါ ဤဟေဗြဲလူကို သခင်သွင်းထားပြီတကား။ သူသည် ငါနှင့်အတူ အိပ်ခြင်း ငှါ ဝင်လာ၍ ငါသည် ကျယ်သောအသံနှင့် အော်ဟစ်ရ၏။ ၁၅ကျယ် ကျယ်အော်ဟစ်သံကို ကြားလျှင်၊ သူသည် မိမိအဝတ်ကိုစွန့်၍ ပြင်သို့ထွက်ပြေး သည်ဟုဆိုပြီးလျှင်၊ ၁၆သခင်ရောက်သည်တိုင်အောင် ထိုအဝတ်ကို မိမိ၌ထားလေ ၏။ ၁၇သခင်ရောက်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်သွင်းထား သောဟေဗြဲကျွန်သည် ကျွန်ုပ် ကိုမရိုမသေပြုခြင်းငှါ ဝင်လာပါ၏။ ၁၈ကျွန်ုပ်သည် ကျယ်သောအသံနှင့် အော်ဟစ် သောအခါ၊ သူသည် မိမိအဝတ်ကို စွန့်၍ ပြင်သို့ ထွက်ပြေးပါသည်ဟူသော စကားဖြင့် ကြားပြောလေ၏။ ၁၉ကိုယ်တော်၏ကျွန်သည် ကျွန်ုပ်၌ ဤသို့ပြုခဲ့ပြီဟု မယားပြောသောစကားကို သခင်ကြားလျှင်၊ ယောသပ်ကို အမျက်ထွက် ၍၊ ၂၀ခေါ်ပြီးမှ၊ ရှင်ဘုရင်ချုပ်ထားသော သူတို့နေရာ ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထား သဖြင့်၊ ယောသပ်သည် ထောင် ထဲမှာ နေရ၏။ ၂၁သို့သော်လည်း ထာဝရဘုရား သည် သူ့ဘက်၌ ရှိ၍ ကယ်မသနားတော်မူသဖြင့်၊ ထောင်မှူးထံ မျက်နှာ ရစေတော်မူ၏။ ၂၂သို့ဖြစ်၍ထောင်မှူးသည် ထောင်၌ ချုပ်ထား သောသူအပေါင်း တို့ကို ယောသပ်လက်သို့အပ်၍၊ ထောင်ထဲတွင် ပြုသမျှသောအမှုကို ယောသပ် စီရင်ရ၏။ ၂၃ထိုနောက် ထောင်မှူးသည် ထောင်အမှုကို ကိုယ်တိုင်ပြန်၍ မကြည့် မရှုရ။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ယောသပ်ဘက်မှာရှိ၍ သူပြုလေ ရာရာ၌ အောင်စေတော်မူသတည်း။” (ကမ္ဘဦးကျမ်း ၃၉း၇-၂၀)
တစ်နေ့ဖောတိဖာ၏အိမ်တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် သူ၏ဇနီး၏လှည့်ဖျားခြင်းကို ခံခဲ့ရပါ သည်။ သို့သော် ယောသပ်သည် သူ့ကိုယ်သူ သူမထံမှ သူ့အဝတ်ကိုစွန့်ကာ၊ ထွက်ပြေးခဲ့ပါသည်။
ဤစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းသည် အခြားလူငယ်များအတွက် မကျော်လွားနိုင်သောအရာ ဖြစ်နိုင်သော် လည်း ယောသပ်သည် အောင်မြင်ကျော်လွားခဲ့သည်။ ချက်ချင်းအောင်မြင်ကျော်လွှားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများကြုံတွေ့ခြင်းအားဖြင့် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကို ကျော်လွှားနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုစုံစမ်းခြင်း များသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်မက်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ ထိုအရာကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် တစ်ခုတည်း သောနည်းလမ်းမှာ ထိုနေရာမှ ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်။ (၂တိ ၂း၂၂တွင် “နုပျိုသောတပ်မက်မှုမှ ထွက်းပြေး ပါ”)။ ယောသပ်၏အောင်မြင်မှု - ပေါတိဖာနှင့် ဘုရားသခင်ပေါ်သော်၎င်း၊ သူ့ကိုယ်တိုင်အပေါ် သူ၏သစ္စာ ရှိခြင်းသည် သူ၏သန့်ရှင်း စင်ကြည်ခြင်းကို ညစ်ညူးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ညစ်ပတ်သောမိန်းမ၏ ဆန္ဒကို လိုက် လျှော့ခြင်းထက် ဘုရားနာမကြောင့် အကျဉ်းထောင်ထဲသို့ သွားရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ည်။ ပေါတိဖာကြောင့် သူ၏ ဇနီးအမှုတွင် ယောသပ်သည် သူ့ကိုယ်သူကာ ကွယ်ပြော ဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ သူတိတ်တဆိတ်ငိုကြွေးခဲ့သည်။ သူ့ဇနီး၏စွပ်စွဲချက်ကို ပေါတိဖာသည် လက်ခံခဲ့ပြီး၊ ယောသပ်ကို အကျဉ်းထောင်ချခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉း၂၁, ၄၀:၂၂
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉း၁၉-၂၂သို့သွားပြီး၊ ၎င်းကိုဖတ်ရှုချိန်တွင် အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပေးပါ။
“၁၉ကိုယ်တော်၏ကျွန်သည် ကျွန်ုပ်၌ ဤသို့ပြုခဲ့ပြီဟု မယားပြောသောစကားကို သခင်ကြားလျှင်၊ ယောသပ်ကို အမျက် ထွက်၍၊ ၂၀ခေါ်ပြီးမှ၊ ရှင်ဘုရင်ချုပ်ထားသော သူတို့နေရာ ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထားသဖြင့်၊ ယောသပ်သည် ထောင်ထဲမှာ နေရ၏။ ၂၁သို့သော်လည်း ထာဝရဘုရားသည် သူ့ဘက်၌ ရှိ၍ ကယ်မသနား တော်မူသဖြင့်၊ ထောင်မှူးထံ မျက်နှာရစေတော်မူ၏။ ၂၂သို့ဖြစ်၍ထောင်မှူးသည် ထောင်၌ ချုပ်ထား သောသူအပေါင်းတို့ကို ယောသပ်လက်သို့အပ်၍၊ ထောင်ထဲ တွင် ပြုသမျှသောအမှုကို ယောသပ်စီရင်ရ၏။ ၂၃ထိုနောက် ထောင်မှူးသည် ထောင် အမှုကို ကိုယ်တိုင်ပြန်၍ မကြည့်မရှုရ။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ယောသပ်ဘက်မှာရှိ၍ သူပြုလေ ရာရာ၌ အောင်စေတော်မူသတည်။” (ကမ္ဘာဦး ၃၉း၁၉-၂၂ )
ယောသပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်သဏ္ဌာန်အားဖြင့် အဆိုးကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်လည်း အတွင်း သဏ္ဌာန်ယုံကြည်မှုအားဖြင့် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သည် အကျဉ်းထောင်ထဲက ယောသပ် ကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်။
ယောသပ်သည် အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ ဖော်ရွေသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဖာရောဘုရင်၏ဘဏ္ဌာစိုးနှင့်စားဖိုမှုးသည် အိပ်မက်များအားဖြင့် ဒုက္ခကြုံတွေ့ရသည်။ သူတို့၏ အိပ်မက်အနက် ကို ဘယ်သူမျှမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ဘဏ္ဌာစိုးနှင့်စားဖိုမှုး၏အိပ်မက်အနက်များကို ယောသပ် အနက်ပြန်ခဲ့သည်။ သုံးလ အကြာတွင် ယောသပ်၏အနက်ပြန်မှုသည် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ဘဏ္ဌာစိုးသည် လွတ်ပြီး၊ စားဖိုးမှုးသည် အသေ သတ်ခြင်းခံရသည်။ ဤအရာက အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ ယောသပ်၏တောင်လေတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဦး ၄၀:၂၃ ကိုကြည့်ပါ။
“သော်လည်း ဖလားတော်ဝန်သည် ယောသပ်ကို မအောက်မေ့ဘဲ မေ့လျော့၍ နေ လေ၏။” (ကမ္ဘာဦး ၄၀:၂၃)
ယောသပ်၏ နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာအကျဉ်းထောင်ကျခြင်းသည် သူ့အတွက် ပြင်းထန်သောမြောက် လေဖြစ်သည်။ “သို့သော်လည်း ဖလားတော်ဝန်သည် ယောသပ်ကို မအောက်မေ့ဘဲ မေ့လျှော့၍နေလေ၏။” ကမ္ဘာဦး ၄ဝး၂၃ ဤအရာသည် ဘဏ္ဌာစိုး၏ကျေးဇူးကန်းမှုကို ပြသသည်။ ကျေးဇူးကန်း သောအခြေ အနေတစ်ခုကြောင့် လူတစ်ဦးကို လောကကိုမုန်း တီးစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော် ယောသပ် မလုပ်ခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ရန် စောင့်ဆိုင်းခြင်း၏သီလကို သင်ယူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ရန် ဆောင်း ဆိုင်းခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏သစ္စာရှိမှုအပေါ် သူ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှု တိုးမြှင့်ဖို့ရန် ဘုရားသခင်သည် ယောသပ် ၏သည်းခံခြင်းကို တိုးမြှင့်ရန်ထောင်ထဲ၌ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆွဲထားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကြာမြှင့်စွာဆွဲ ထားခြင်းသည် အောင်မြင်ကျော်လွားနိုင်သူတစ်ယောက်အတွက် သူ၏ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိတ်မင်းကြီးက “ထာဝရဘုရားကို မြော်လင့်လော့။ အားယူ၍ ရဲရင့်သောစိတ်နှလုံးရှိလော့။ ထာဝရဘုရားကို မြော်လင့်လျက် နေလော့။” (ဆာလံ ၂၄း၁၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၇:၁၂-၁၇ဖတ်ရှုချိန် မတ်တပ်ရပ်ပေးကြပါ။
“၁၂အဘနှင့် အစ်ကိုများ၊ အဘ၏အိမ်သားရှိသမျှတို့ကို အနည်းအများအလိုက် ကျွေး မွေး၏။ ၁၃အလွန်အစာခေါင်းပါး၍ တပြည်လုံးစားစရာ မရှိသောကြောင့်၊ အဲဂုတ္တုပြည် နှင့် ခါနာန်ပြည်သည် အားလျော့လေ၏။ ၁၄ပြည်သားဝယ်သော စပါးအဘိုး၊ အဲဂုတ္တု ပြည်၊ ခါနာန်ပြည်၌ တွေ့သမျှသော ငွေကိုယောသပ်စုသိမ်း၍ နန်းတော်သို့ သွင်းထား လေ၏။ ၁၅အဲဂုတ္တုပြည်၊ ခါနာန်ပြည်၌ ငွေကုန်သောအခါ၊ အဲဂုတ္တုလူ အပေါင်း တို့သည် ယောသပ်ထံသို့လာ၍ စား စရာဘို့ ပေးသနားတော်မူပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ငွေကုန်သော်လည်း ရှေ့တော်၌ အဘယ်ကြောင့် သေရပါအံ့နည်းဟု လျှောက်ကြ သော်၊ ၁၆ယောသပ်က၊ ငွေကုန်လျှင် တိရစ္ဆာန်များကို ပေးကြ။ တိရစ္ဆာန်အတွက် စပါးကိုပေးမည်ဟုဆိုသည် အတိုင်း၊ ၁၇သူတို့သည် တိရစ္ဆာန်တို့ကိုယူခဲ့၍၊ ယောသပ် သည် မြင်း၊ သိုး၊ နွား၊ မြည်းတို့အတွက် စပါးကိုပေးသဖြင့် ထိုနှစ်တွင် တိရစ္ဆာန်ရှိ သမျှတို့ အတွက် ပြည်သားများကို ကျွေးမွေး၏။” (ကမ္ဘာဦး ၄၇:၁၂-၁၇)
ဒေါက်တာလင်းက “အပြစ်ပေးဆုံးမမှုကို ခံရစဉ်အခါ မပျော်ရွင်ပါ၊ နာကျင်မှုနှင့်မနှစ်မြို့ ဖွယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏အသီးကို ယူဆောင်လာပေးသည်။ ဟေဗြဲ ၁၂း၁၁
ဆုံးမခြင်းမည်သည်ကား၊ ခံရစဉ်အခါ ဝမ်းမြောက်စရာမထင်၊ ဝမ်းနည်းစရာထင် တတ်၏။ သို့သော်လည်း၊ ဆုံးမခြင်းကိုခံရ သောသူတို့ သည်၊ နောက်မှ ငြိမ်သက် ခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးကို ခံရကြ၏။ ဟေဗြဲ ၁၂း၁၁
နှစ်ရှည်အကြာ၌ ဘုရားသခင်သည် ဖါရောဘုရင်ကို အိပ်မက်တစ်ခုမက်စေခဲ့သည်။ အိပ်မက်အနက် ပြန်ခဲဖူးသည့် ယောသပ်ကို ဘဏ္ဌာစိုးက သတိရ၍ ဖါရော၏အိပ်မက် အနက်ပြန်ရာတွင် ယောသပ်ကိုခေါ်ရန် ဘုရင်ကိုပြောသည်! အစာပေါကြွယ်သည့်နှစ် ခုနှစ်နှစ်ပြီးနောက် အစာခေါင်းပါးသည့်နှစ် ခုနှစ်နှစ်လာမည်ဟု အိပ်မက်အဓိပ္ပာရသည်။ ဖါရောသည် ယောသပ်ကို သဘာဝလွန်ပါရမီရှင်တစ်ပါးအဖြစ် မြင်တွေ့သည်။ ထို့ နောက် ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ အုပ်စိုးသူတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့သည်။ (၄၁း၃၈-၄၃) သူသည် ပညာနှင့် သနားဖြင်းဂရုဏာဖြင့် အဲဂုတ္တုပြည်၌ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၊ စည်းကမ်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် သူ့ညီအစ်ကို များကို အုပ်စိုးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး၌သူသည် ညီအစ်ကိုတို့အပေါ်၌ လေးစားဖွယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (၄၉း၂၆)
ဒေါက်တာလင်းက “ဘုရားသခင်က ယောသပ်ကိုလောက နိုင်ငံတော်ကိုဦးဆောင်ရန် လေ့ကျင့်ပေး သလို၊ လာမယ့်သူ၏နိုင်ငံတော်၌ အုပ်စိုးရန် မိမိ၏အောင်မြင်ကျော်လွှားသူများကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။ ကယ်တင်ခြင်းက အခြေနေပေါ် မမူတည်ပါ၊ လူသား၏အလုပ်မပါဝင်ပါ။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အုပ်စိုးခွင့် သည် အခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက
“သည်းခံလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ စိုးစံလိမ့်မည်။ ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ် လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်။” (ဟေဗြဲ ၂း၁၂)
သင်းအုပ်ဆရာ က အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ ၁၄နှစ်တိုင် ဒုက္ခခံခဲသည်။ သူက “ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကြားမှ သစ္စာရှိသူ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ကို ကွန်တော်မတွေ့ဖူးပါ” (နိဒါန်း “ထောင်နံရံ စကားပြောနိုင်လျှင်)
နောက်ထပ် သင်းအုပ်ဆရာ က “ငါ့အစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သင့်အသက်တာက ဘုရားလက်ထဲမှ ရွံ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်ပါ။ သူ့အချိန်တန်လျှင် သူကသင့်ကို ခက်ခဲစေမည်၊ သူသည် သင့်ကို အဘယ်သို့ ပုံသွင်းနေသည်ကို သတိပြုပါ။ အာမင်” (စာမျက်နှာ ၁၆)
သင်သည် ယောသပ်ကဲ့သို့အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါက၊ သင့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ကတိရှိပါသည်။ ဗျာဒိတ် ၂း၂၆ သို့သွားပါ။
“အကြင်သူသည်အောင်မြင်၍ အဆုံးတိုင်အောင် ငါ့အကျင့်ကိုကျင့်၏။ ငါ့ခမည်းတော် သည် ငါ့အား အခွင့် ပေးတော်မူသကဲ့သို့၊ လူမျိုးတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ထိုသူအား ငါသည် အခွင့်ပေးမည်။” ဗျာဒိတ် ၂း၂၆
ဒေါက်တာလင်း၊ သင်၏တရားဒေသနာအားဖြင့် ကျွန်တော့်ကို သင်ကြားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းကကျွန်တော့်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်ကြားမှုမှ ကျွန်တော့်အသက်တာကို အကြွေးတင်သည်! အားလုံးမတ်တပ်ရပ်၍ “ကျွန်ုပ်သည်ကားတိုင်၏ စစ်သည်လား” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုကြ ပါစို့။
ကျွန်ုပ်ကားတိုင်စစ်သည် တစ်ဦးလား၊ သိုးသငယ်၏‌ နောက်လိုက်လား။
နာမ‌ကြောက်ရွံ့နေရမည်လား၊ နာမ‌တော်ကို ရှက်ကြောက်
သာယာပန်းများ‌ ဝေဆာကုတင်၊ ကောင်းကင်သို့ သယ်ဆောင်မလား
ခြားသူများ‌ အောင်ပွဲဆွတ်ခူးစဥ်၊ အသွေးပင်လယ် စီး‌မျော
သူရန်များ ရင်ဆိုင်ရန်မရှိ၊ လွမ်းမိုးခြင်း ငါရပ်တန့်
ဤလောက ကျေးဇူးမိတ်ဆွေလား၊ ဘုရားထံ ကူညီ‌တောင်း
ငါစိုးစံရင် ငါတိုက်ရမည်၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ တိုးပွား‌စေ
ငါပင်ပန်းခံ နာကျင်မှုသည်းခံ၊ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ထောက်မ။
(၁၆၇၄-၁၇၄၈ခုနှစ် အိုက်ဇက်ဝက်စ်) သီကုံး‌သောကားတိုင်၏စစ်သည်‌
အကယ်၍သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရသေးပါက ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားစေ လိုပါသည်။ သူသည် မိတ်ဆွေ၏အပြစ်အတွက် ပေးဆပ်ရန် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းကြွလာခဲ့သည်။ သူ့ကိုယုံကြည်ပြီး ခဏတာအတွင်း သူ၏အသွေးတော်နှင့် မိတ်ဆွေကို အပြစ်မှသန့် စင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ဖို့ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။